သိမှတ်စရာ လူမှုပြောဆိုဆက်ဆံရေးရာ | THANGNO
နိဒါန်း။ ။ မိခင်ဝမ်းထဲမှ လွတ်ကျမွေးခါစ ကလေးပင်လျှင် “အူဝဲ” ဟူသော ဆက်သွယ်ရေးရာအသံပြုချက်ဖြင့် မိသားစုနှင့် လောကကြီးကို စတင်ဆက်ဆံရပါသည်။
လူမှုနယ်ပယ်၌ ပြောဆိုဆက်ဆံရေးသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပြုလုပ်ရသော၊ ရှောင်လွှဲ မရသော အရာဖြစ်သည်။ မိသားစု၌၊ လုပ်ငန်းခွင်၌ ပြောဆိုဆက်ဆံရေးကို လူသားတိုင်း ပြုလုပ်ရ၏။ မိတ်ဆွေအချင်းချင်း အကြား၊ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက် အချင်းချင်းအကြား၊ သမီးရည်းစားနှင့် အိမ်ထောင်ရှင် များအကြား … နေ့စဉ် စကားဖြင့် ပြောဆို ဆက်ဆံကြရ၏။
လူ့ဘ၀တလျှောက် မရှိမဖြစ် အလွန်အရေးကြီးသော ဤစကားပြောဆို ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်သော အ ခြေခံအချက်များကို တင်ပြသွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
နားထောင်ခြင်းသည် ပြောဆိုဆက်ဆံရေး၌ အဓိကကျသောအရာ ဖြစ်ပါသည်။ ဂျာမန်ဓမ်္မတွေးခေါ် ပညာရှင် Dietrich Bonhoefer က ““သူတပါးနှင့်
ပြောဆို ဆက်ဆံရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့တင်ရှိသောအကြွေးမှာ အာရုံစူးစိုက်၍ နားထောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိညီ အစ်ကို၊ သူတပါး၏စကားကို နားမထောင်သော သူသည် ဘုရားသခင်၏ စကားကိုလည်း နားထောင်မည် မဟုတ် ပေ”” ဟုဆိုဖူးပါသည်။ နားထောင်ရာ၌ အာရုံစူးစိုက်မှု လိုသည်။ စိတ်ဓါတ် တက်ကြွမှုလိုသည်။ တရုတ်ပညာရှိ ကွန်ဖူးရှပ်၏ မြွက်ဆိုချက်ကိုကြည့်ပါ။ ““လူသည် ပါး စပ်တစ်ပေါက်သာရှိပြီး နားနှစ်ပေါက်ရှိရခြင်းမှာ နည်း နည်းပြောပြီး များများ နားထောင်ရန်ဖြစ် သည်”” ဟုပြော ဖူးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတပါး၏ပြောစကားကို နားမထောင်ဘဲ သူ၏ပြောစကားကိုပင်လျစ် လျူရှုတတ် ကြသည်။ ဟန်ဆောင် ၍လည်း နားထောင်လေ့ရှိကြ၏။ သူများရှေ့မှာ၊ စင်ပေါ်မှာ အိပ်ငိုက်လေ့ရှိကြသူများကို သတိထား လေ့လာကြည့်ပါ။ အိပ်ငိုက်နေစဉ် သူများက အိပ်ငိုက်သည်ဟု မယူဆရလေအောင် ပါးစပ်လှုပ်၊ ခေါင်းလှုပ်၊လက်လှုပ်ပြီး ဟန်ဆောင်တတ်ကြသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတပါးပြော စကားကို တချို့တ၀က် သို့မဟုတ် မိမိစိတ်ဝင်စားသည် များကိုသာ ကွက်၍နားထောင်တတ်ကြသေးသည်။ ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်၍ နားထောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ သူတပါး၏ပြော စကားများကို နားလည်ရန် ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် နားထောင်ခြင်း၊ ပြောဆိုသူ၏ရင်ထဲသို့ ၀င်၍ခံစား ပေးခြင်း၊ သူ၏အသိဥာဏ်ကိုပါ နားလည်ရန် ကြိုးစား ပေးခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ တနည်း အားဖြင့်ဆိုရသော် သူတ ပါးကို စိတ်ဝင်စားခြင်း၊ အာရုံစိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤ အာရုံစိုက် နားထောင်ခြင်းသည် ပြောဆို ဆက်ဆံ ရေး ၏ သော့ချက်၊ အခြေခံအကျဆုံး အချက်ပင်ဖြစ်သည်။
အဆင့် (၁) အချင်းချင်း သာမန်နှုတ်ဆက်ခြင်း
နေကောင်းသလား၊ စားပြီးပြီလား၊ ဘယ်သွား မလို့လဲ၊ စသည့်စကားများသည် သာမန်နှုတ်ဆက် စကားများ ဖြစ်သည်။မေးသောသူပင်လျင် ဖြေလာမည့် အဖြေ
မည်သို့ဖြစ်ပါစေ အရေးတကြီးထားလေ့မရှိသည့် အမေးစကားများ ဖြစ်သည်။ လူမျိုးအသီးသီး၌ အထက် ပါမေးခွန်စကားများနှင့် အလားတူသော နှုတ်ဆက်စကား များ (ဥပမာ – Good morning! Good evening! Hello! Hi! ) စသည်ဖြင့်ရှိပါသည်။
အဆင့် (၂) အချက်အလက်၊ သတင်းများဖလှယ်ခြင်း
ဤအဆင့်သည် သာမန်နှုတ်ဆက်ခြင်းထက် ပိုသောစကားဖြစ်သည်။
ဥပမာ-“ရာသီဥတုသာယာ တယ်နော်” “မနေ့ညက ဘောလုံးပွဲ သိပ်ကောင်းတာပဲ” စသည်ဖြင့် အပြန်အလှန် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖလှယ်သည့် အဆင့်ဖြစ် သည်။ တနည်းအားဖြင့် လေး နက်မှုမရှိစေကာမှု စိတ်ဝင်စားစွာ သတင်းပေးခြင်း၊ ယူခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အဆင့် (၃) ခံယူချက်သဘောထား၊ရူပါရုံ၊ တန်ဖိုးထားမှုများကိုဝေမျှခြင်း
ဤအဆင့်တွင် ပြောဆိုသည့်ပုဂ်္ဂိုလ်များသည် ခဏတာတွေ့ဆုံရုံ၊ သိကျွမ်းရုံနှင့် လွယ်လွယ်ကူကူ ဆွေး နွေးပြောဆို၍ မရသည့်စကားများဖြစ်သည်။မိမိ၏ခံယူ ချက်၊
ယုံကြည်တန်ဖိုးထားမှု စသည်များကို လေးနက်စွာ ဆွေးနွေးသည့်အဆင့်ဖြစ်သည်။
အဆင့်(၄) ခံစားမှု(Feeling) ကိုသူတပါးနှင့်ဝေမျှခြင်း
ဤအဆင့်သည် နောက်ဆုံးနှင့် အလေးနက်ဆုံး ပြောဆိုဆက်ဆံရေး အဆင့်ဖြစ်သည့် ၀မ်းနည်းမှု၊ ၀မ်းသာ ပျော်ရွှင် မှုများကို သူတပါးအား ရင်ဖွင့်ခြင်း၊ ဝေမျှခြင်း အဆင့်ဖြစ်သည်။ ဤ အဆင့်၌ များသောအားဖြင့် ရင်းနှီးသူများ၊ သမီးရည်းစား နှင့်ရည်မှန်းချက် တူသော ပုဂ်္ဂိုလ်များ၊ အိမ်ထောင်ရှင်များ အကြား၌ သာ နှစ်ကိုယ်ကြား ရင်ဖွင့်တိုင် ပင် ဆွေးနွေးရခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ် ရင်တွင်းဖြစ်ခံစားမှုများကို ဖလှယ်ရသည့် အဆင့်ဖြစ်သည်။
(ဂ)ပြောဆိုဆက်ဆံရေးနယ် ပယ်၌အလွန်အရေးပါသော စကားငါးခွန်း
(၁) စကားငါးလုံးပါသောစကားစု – “You didagood job” (သင်လုပ်တာ သိပ်ကောင်းတာပဲ)
“You didagood job” ဟူသော ချီးမွမ်းစကားကို သူတပါးအပေါ်၊ လုပ် ဖေါ်ဆောင်ဖက်၊ မိတ်ဆွေ၊ ဇနီး/ ခင်ပွန်း သည် အပေါ် များများပြောပါ။ သင့်အ ပေါ် ထိုသူ၏တုန့်ပြန်မှုသည် လွန်စွာ အကျိုးရလဒ် ကောင်းကြောင်း တွေ့မှာ ဖြစ်ပါသည်။
(၂) စကားလေးလုံးပါသော စကားစု – “What is your opinion” (ခင်ဗျားဘယ်လို သဘောရသလဲ)
“What is your opinion” ဟူ သောမေးခွန်းသည် သူတပါးကို လေးစား အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ သူတပါး၏အမြင် ခံယူချက်ကိုလည်း ကြိုဆိုလက် ခံခြင်း သဘောကိုဆောင်သည်။ လူမှုဆက်ဆံရေး၌ အလွန်အ ထောက် အကူပြုသောစကား ပင်ဖြစ်သည်။
(၃) စကားသုံးလုံးပါ သော စကားစု – “Let’s work to gether” (အတူတူ ဆောင်ရွက်ကြစို့)
“Let’s work to gether” ဟူသောစကားသည် သူတပါး နှင့် ပူးတွဲ၍ လုပ်ကိုင်လိုစိတ် ကိုဖော်ပြသော စကားပင်ဖြစ် သည်။ မိသားစု၊ မောင်နှမ အ ချင်းချင်း၊ ရင်းနှီးသော သူငယ်ချင်းများ အကြား၊ လုပ် ဖော်ဆောင်ဖက် များအကြားတွင် အလွန်အရေးပါသော ပြောဆို ကျင့်သုံးရမည့် စကားဖြစ်သည်။
(၄) စကားလုံးနှစ်လုံးပါသော စကားစု – “Thank you”
“Thank you” (ကျေးဇူးပဲ) ဟူသောစကားနှင့် Excuse me (ကျေးဇူးပြု၍) ဟူသော စကားနှစ်လုံးတည်းဖြင့် ကမ်္ဘာကြီးကို ပတ်၍ရသည်ဟု ကြားဖူးပါသည်။ လူတိုင်း
လူတိုင်း၌ ကျေးဇူးတင်စရာ များစွာရှိသည်။ ရှင်ပေါလုက ပင်လျှင် “အရာရာတိုင်း၌ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြလော့” (ဧဖက် ၅း၂၀၊ ၁ သက် သာလောနိတ် ၅း၁၆) ဟုမှာ ထားပါသည်။ သူများကို ““ကျေးဇူးတင်ပါသည်”” ဟု များများပြောပေးပါ။
(၅) စကားတစ်လုံးသာပါသော စကား -(We)
“We ” (ကျွန်ုပ်တို့) ဟူသောစကားသည် တစ်ကိုယ်ကောင်း မဆန်ခြင်း၊ “ငါ” တည်းဟူသော အတ်္တ သဘောနှင့်ဆန့်ကျင် သောစကားဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် များများပြောရမည့် စကားဖြစ်သည်။
အိမ်ထောင်ရှင်များသာမက သမီးရည်းစားများ အနေဖြင့် အောက်ပါဆက်ဆံပြောဆိုရေးရာ အဆင့်ဆင့် ကို လေးနက် စွာကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။
အဆင့် (၁) သာမန်စကားပြောဆိုခြင်း (Small Talk)
ဤအဆင့်တွင် ပြောဆိုသူနှစ်ဦးသည် ဘယ် အကြောင်းအရာကိုမဆို လွပ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ပြောဆို ရသည့် သာမန်စကား ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ရုပ်ရှင်အ ကြောင်း၊
နေ့စဉ် ကြုံတွေ့ရသည့် သာမန်အဖြစ်အပျက် များနှင့် သက်ဆိုင်သောအရာများကို ပြောဆိုခြင်းဖြစ် သည်။ လေးနက်စွာ အဖြေရှာစရာမလိုသော၊ သာမန် ပြောဆို၍
နားထောင်တုံ့ပြန်လျှင်ပြီးနိုင်သည့် သာမန် စကားပြော ဆိုမှုအဆင့်ဖြစ်သည်။
အဆင့် (၂) ပြဿနာကိုတိုင်ပင်ခြင်း (Serious Talk)
ဤပြောဆိုဆက်ဆံရေးအဆင့်သည် သာမန်စကားပြောဆိုခြင်း သက်သက်မဟုတ်တော့ပေ။ မိမိကြုံတွေ့နေသည့် ပြဿနာ၊ မိသားစုပြဿနာ၊ အသင်းတော်၊
အဖွဲ့အစည်းပြဿနာများကို တခြားသူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ အကြံယူခြင်း၊ အဖြေရှာခြင်း အဆင့် ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်၌ ဦးနှောက်သုံး၍ လေးနက်စွာ ဆွေးနွေးရ သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေ အမျိုးမျိုးကို ရှာရသည်။ အာရုံစိုက်၍ လေးလေးနက်နက် ပြောဆိုနားထောင် ရသည်။
အဆင့် (၃) မိမိကိုယ်တိုင်၏ ပြဿနာကို ရင်ဖွင့်ခြင်း (Self Talk)
ဤအဆင့်သည် ဒုတိယအဆင့်နှင့် ခြားနားပြီး ပုဂ်္ဂလိကနှင့် ပတ်သက်သော ခံစားမှု၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု၊ ကြောက်ရွံ့ အားငယ်မှု စသည်များကို ထိန်ချန်ကွယ် ၀ှက်ခြင်းမရှိဘဲ ရင်ဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်ချင်းစာနာ ခြင်း၊ ဂရုစိုက်ခြင်း၊ မေတ်္တာ စေတနာထားခြင်း၊ ချစ်ခြင်း စသည့်အချက်များ မပါဝင်ပါက ဤအဆင့်၌ ပြောဆို ဆက်ဆံ၍ ရမည်မဟုတ်ပေ။
အဆင့် (၄) ၀ိညာဉ်ရေးရာဆိုင်ရာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်း (Soul Talk)
ယုံကြည်ခြင်းဆိုင်ရာ၊ ဘုရားတရား ကျမ်းဂန် များနှင့် ပတ်သက်သည်များကို ဖလှယ်ခြင်း၊ အကြံပေး အကြံယူခြင်း၊ နည်းလမ်းညွှန်ပြခြင်း၊ မေးမြန်းဆန်းစစ် ခြင်း
စသည်များဖြစ်သည်။ မာလခိ ၃း၁၆၌ပါသော ““ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ရိုသော သူများအနေဖြင့် အချင်းချင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရသည်”” ဟူသော နှုတ်က ပတ်တော်အတိုင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်သည့် အဆင့် ဖြစ်သည်။
အဆင့်(၅) ချစ်ခြင်းမေတ်္တာ ကိုပြသော စကား ပြောဆိုခြင်း (Sweet Talk)
ဤနောက်ဆုံးအဆင့်သည် သမီး ရည်းစားဘ၀မှ အဖိုးကြီး၊အဖွားကြီး အရွယ် အထိ နေ့စဉ်ပြောဆိုရမည့် အရေး ကြီး ဆုံးပြောဆိုမှု အဆင့်ဖြစ် သည်။“I love you ” (နင့်ကို ငါချစ်တယ်) ဟူသောစကား ကို တသက်လုံး ပြောဆိုနိုင်ရပေမည်။ ကိုယ် ခန်္ခာပုံမလာတော့ သည့်သက် ထားအိုအား “မောင့်သက်ထား မော် ဒယ်လွန် (ခေတ်မမီ) လေးရယ်” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ခါးကုန်း ကုန်းဖိုးသက်အိုအား ဇနီးသည် အ နေဖြင့် “ကိုကို ဆွာဇီနေကာရေ ..” စသည် ဖြင့်လည်းကောင်း တသက်လုံးချစ်သက်မ ပြယ်သည့် ထာဝရ မေတ်္တာပြ စကားများကို ပြောရ သည့် အဆင့်သည် အခက်ခဲဆုံးနှင့် အ လေးနက်ဆုံး ပြောဆိုဆက်ဆံရေး အ ဆင့်ဖြစ်သည်။
နိဂုံး။ ။ ၁၉၉၄-၁၉၉၅ ခုနှစ်များ၌ အလွန်ကျော်ကြားသော အမေရိကန် အောက်လွတ်တော်ဥက်္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် လွတ် တော် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Mr. Gingrich သည် ထိုစဉ်က သမ်္မတဖြစ်သူMr. Bill Clinton ၏မိခင်အား ခွေးမကြီး (Bitch) ဟုခေါ်မိရခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ရာထူး မှနှုတ်ထွက်ခဲ့ရဖူးပါသည်။ စကား တစ်ခွန်းသည် လူကိုလဲစေနိုင်သလို လူကို လည်းတည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ် ပါ၍ လူမှုနယ်ပယ်၌ အလွန်အရေးပါသော စကားပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း အမှုကို ပြုကြ ရာ၌ သတိထား၍ ခရစ်ယာန်ပီသစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံကြရန် အလွန်လိုအပ်ပါသည်။
Dr.Si Khia (MIT)